Nei Tichikoshesa Kudya kwaShe Kwemanheru? | Yokudzidza
Nharireyomurindi—Yekudzidza | January 2015
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bicol Bislama Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik Estonian Fijian Finnish French Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Kazakh Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Latvian Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mambwe-Lungu Marathi Mauritian Creole Maya Mixe (North Central) Mizo Mongolian Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuRussia Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Runyankore Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
Nei Tichikoshesa Kudya kwaShe Kwemanheru?
“Rambai muchiita izvi muchindiyeuka.”—1 VAK. 11:24.
Nei tichifanira kuyeuka Kudya kwaShe Kwemanheru?
Zvii zvinoshandiswa paChirangaridzo uye zvinomirirei?
VaKristu vanonzwa sei pavanoverenga nezvetariro yavo yavakapiwa naMwari?
1, 2. Jesu akaitei manheru omusi waNisani 14, 33 C.E.? (Ona mufananidzo uri panotangira nyaya ino.)
AVA manheru, asi muJerusarema mune chiedza chejenaguru. Uyu musi waNisani 14, 33 C.E. Jesu nevaapostora vake vachangobva kudya Paseka, vachiyeuka kununurwa kwakaitwa vaIsraeri muuranda makore anenge 1 500 apfuura. Jesu anotanga kudya kwaShe kwemanheru aine vaapostora vake 11 vakatendeka, uye zvaanoita ipapo ndizvo zvichatevedzerwa nevanhu pakuyeuka rufu rwake ruchaitika Nisani 14 iyeye asati apfuura. *—Mat. 26:1, 2.
2 Jesu anonyengetera obva apa vaapostora vake chingwa chisina mbiriso achiti: “Torai, mudye.” Anotora kapu yewaini obva anyengeterazve, oti: “Inwai, imi mose.” (Mat. 26:26, 27) Haasi kuzovapa zvimwe zvokudya, asi ane zvakawanda zvokutaura kuvateveri vake ivavo vakatendeka manheru ano anokosha.
3. Nyaya ino ichapindura mibvunzo ipi?
3 Iwayo ndiwo matangiro akaita Chirangaridzo chorufu rwaJesu, chinonziwo “Kudya kwaShe Kwemanheru.” (1 VaK. 11:20) Vamwe vangabvunza kuti: Nei tichifanira kuyeuka rufu rwaJesu? Chingwa newaini zvinomirirei? Tingagadzirira sei Chirangaridzo? Ndivanaani vanofanira kudya chingwa uye kunwa waini? Uye vaKristu vanonzwa sei pavanoverenga nezvetariro yavo iri muMagwaro?
NEI TICHIYEUKA RUFU RWAJESU?
4. Kufa kwaJesu kunotibatsira sei?
4 Tose tine chivi uye tinofa nokuti takabva kuna Adhamu. (VaR. 5:12) Hakuna munhu ane chivi anogona kupa Mwari rudzikinuro nokuda kweupenyu hwake kana hwevamwe. (Pis. 49:6-9) Asi norufu rwake, Jesu akabhadhara rudzikinuro rwaidiwa. Rudzikinuro urwu rwaiva rwemuviri wake wakanga usina chivi uye ropa rake rakadeurwa. Kumira kwakaita Jesu pamberi paMwari achiratidza kuti ainge apa upenyu hwake hwaimiririrwa neropa rake kwakaita kuti tikwanise kununurwa kubva muchivi norufu uye tikwanise kuwana upenyu husingaperi.—VaR. 6:23; 1 VaK. 15:21, 22.
5. (a) Tinoziva sei kuti Mwari naKristu vanoda vanhu? (b) Nei tichifanira kunge tiripowo pakuyeuka rufu rwaJesu?
5 Chipo chorudzikinuro chinoratidza kuti Mwari anoda vanhu. (Joh. 3:16) Kubvuma kwakaita Jesu kufira vanhu kunoratidzawo kuti anotida. Izvi hazvishamisi nokuti Jesu paaiva “mhizha” yaMwari achiri kudenga, aifarira “kwazvo zvinhu zvaiva nechokuita nevanakomana vevanhu”! (Zvir. 8:30, 31) Kuonga zvatakaitirwa naMwari neMwanakomana wake kunofanira kuita kuti tide kuvapowo pakuyeuka rufu rwaJesu. Patinoita izvozvo tinenge tichiteerera murayiro wokuti: “Rambai muchiita izvi muchindiyeuka.”—1 VaK. 11:23-25.
CHINGWA NEWAINI ZVINOMIRIREI?
6. Tinofanira kuona sei chingwa newaini zvinoshandiswa paChirangaridzo?
6 Jesu paakatanga Chirangaridzo, haana kuchinja chingwa kuva muviri wake uye waini kuti ive ropa rake. Asi akataura nezvechingwa achiti: “Ichi chinomirira muviri wangu.” Akatiwo nezvewaini: “Iyi inomirira ‘ropa rangu resungano,’ richadururirwa vazhinji.” (Mako 14:22-24) Saka zviri pachena kuti chingwa newaini zvinhu zvokungofananidzira chete.
7. Chingwa chinoshandiswa paChirangaridzo chinomirirei?
7 Pachiitiko ichocho chinokosha chakaitwa muna 33 C.E., Jesu akashandisa chingwa chisina mbiriso chainge chasara paPaseka. (Eks. 12:8) Dzimwe nguva Magwaro anotaura nezvembiriso achireva uipi kana kuti chivi. (Mat. 16:6, 11, 12; Ruka 12:1) Saka kushandisa kwakaita Jesu chingwa chisina mbiriso kwaikodzera nokuti muviri wake wainge usina chivi. (VaH. 7:26) Ndicho chikonzero nei paChirangaridzo pachishandiswa chingwa chisina mbiriso.
8. Waini inoshandiswa paChirangaridzo inomirirei?
8 Waini yakashandiswa naJesu musi waNisani 14, 33 C.E., yaimirira ropa rake, sezvinongoitawo waini inoshandiswa paChirangaridzo mazuva ano. Kunze kweJerusarema kwaiva nenzvimbo yainzi Gorogota, uye panzvimbo iyoyo ndipo pakadeurwa ropa raJesu kuti ‘tikanganwirwe zvivi.’ (Mat. 26:28; 27:33) Sezvo chingwa newaini zvinoshandiswa paChirangaridzo zvichimirira chibayiro chaJesu, zvinokosha kuti tigadzirire Kudya kwaShe Kwemanheru kunoitwa gore negore. Kugadzirira kunoratidzawo kuti tinoonga chipo ichocho chinokosha.
9. (a) Nei zvichikosha kuti titevedzere purogiramu yokuverenga Bhaibheri yeChirangaridzo? (b) Unonzwa sei nezverudzikinuro?
9 Kana tikatevedzera purogiramu yekuverenga Bhaibheri yeChirangaridzo iri mukabhuku kaKuongorora Magwaro Zuva Nezuva, tinogona kufungisisa zvakaitwa naJesu ava kuda kufa. Izvi zvinogona kutibatsira kuti tinge takagadzirira mwoyo wedu panosvika Kudya kwaShe Kwemanheru. * Imwe hanzvadzi yakati: “Tinongoti dai Chirangaridzo chasvika.” Yakawedzera kuti kukoshesa kwainoita Chirangaridzo kunoramba kuchiwedzera gore negore. Yakataura kuti pakafa baba vayo yakanyatsoona kukosha kunoita rudzikinuro. Hanzvadzi iyi inoti: “Ndaiziva magwaro ose uye ndaikwanisa kuatsanangura. Asi pandakafirwa ndakatanga kunyatsonzwisisa kukosha kunoita makomborero atichawana nemhaka yorudzikinuro uye mwoyo wangu wakabva wanyevenuka.” Chokwadi patinogadzirira Chirangaridzo, zvakanaka kuti tifungisise kuti chibayiro chaJesu chinotisunungura sei pakurwadza kwechivi nerufu.
Shandisa zvatinopiwa nesangano redu kuti unge wakagadzirira mwoyo wako panosvika Chirangaridzo (Ona ndima 9)
10. Kugadzirira Chirangaridzo kungatibatsira sei paushumiri hwedu?
10 Patinogadzirira Chirangaridzo tinogonawo kufunga nezvekuwedzera ushumiri hwedu, zvimwe nokuita upiyona hwebetsero mumwaka weChirangaridzo. Patinenge tichikoka vatinodzidza navo Bhaibheri nevamwewo vanhu kuti vauye kuChirangaridzo, tinowana mufaro nokuti tinenge tichitaura nezvaMwari neMwanakomana wake, uye makomborero achawanikwa nevaya vanoita zvinodiwa naJehovha uye vanomurumbidza.—Pis. 148:12, 13.
11. Paiitwa Chirangaridzo, vamwe vaKristu vaiva kuKorinde vaidya sei chingwa nokunwa waini zvisina kukodzera?
11 Paunenge uchigadzirira Kudya kwaShe Kwemanheru, funga zvakanyorwa nemuapostora Pauro kuungano yechiKristu yaiva kuKorinde. (Verenga 1 VaKorinde 11:27-34.) Pauro akataura kuti munhu wose anodya chingwa uye anonwira mukapu zvisina kukodzera ane “mhosva pamusoro pomuviri neropa raShe,” Jesu Kristu. Saka munhu akazodzwa anofanira kutanga ‘azviongorora kuti aone kana akakodzera’ asati adya chingwa uye kunwa waini. Kana akasadaro anenge ‘achizvidyira nokuzvinwira kutongwa.’ Nemhaka yokuti vaisazvibata zvakanaka, vazhinji vaiva muKorinde vainge ‘vasina simba uye vari ndonda, uye vakati wandei vainge vakafa pakunamata.’ Zvichida vamwe vaidyisa uye vaidhakwa Chirangaridzo chisati chaitwa kana kuti chiri pakati zvokuti vaikotsira. Kudya chingwa uye kunwa waini vari mumamiriro ezvinhu akadaro kwaiita kuti Mwari asavafarira.
12. (a) Pauro akafananidza Chirangaridzo nechii, uye akanyevera vanodya kuti chii? (b) Munhu anodya chingwa nokunwa waini paChirangaridzo, anofanira kuitei kana akaita chivi chakakura?
12 Pauro akafananidza Chirangaridzo nekugoverana zvokudya nevamwe uye akayambira vaya vanodya kuti: “Hamugoni kunwira mukapu yaJehovha uye mukapu yemadhimoni; hamugoni kudyira pa‘tafura yaJehovha’ uye patafura yemadhimoni.” (1 VaK. 10:16-21) Kana munhu anodya chingwa nokunwa waini paKudya kwaShe Kwemanheru akaita chivi chakakura, anofanira kutsvaka kubatsirwa. (Verenga Jakobho 5:14-16.) Kana munhu iyeye akazodzwa akabereka “zvibereko zvakakodzera rupfidzo,” anenge asingazvidzi chibayiro chaJesu paanodya chingwa nokunwa waini zvepaChirangaridzo.—Ruka 3:8.
13. Nei zvichibatsira kuti tinyengetere nezvetariro yatakapiwa naMwari?
13 Patinenge tichigadzirira Chirangaridzo, zvakanaka kuti tinyatsofungisisa uye tinyengetere nezvetariro yedu yatakapiwa naMwari. Hapana mushumiri waJehovha uye muteveri akatendeka weMwanakomana wake angada kusaremekedza chibayiro chaJesu nokudya chingwa newaini paChirangaridzo, iye asina uchapupu hwakajeka hwokuti akazodzwa. Saka munhu angaziva sei kana achifanira kudya nokunwa paChirangaridzo?
NDIVANAANI VANOFANIRA KUDYA NOKUNWA PACHIRANGARIDZO?
14. Sungano itsva inei chokuita nokudya nokunwa paChirangaridzo?
14 Vaya vakakodzera kudya chingwa nokunwa waini paChirangaridzo vane chokwadi chizere chokuti vari musungano itsva. Jesu akataura nezvewaini achiti: “Kapu iyi inomirira sungano itsva muropa rangu.” (1 VaK. 11:25) Achishandisa muprofita Jeremiya, Mwari akataura kuti aizoita sungano itsva yainge yakasiyana nesungano yoMutemo yaainge aita nevaIsraeri. (Verenga Jeremiya 31:31-34.) Mwari akaita sungano itsva naIsraeri waMwari. (VaG. 6:15, 16) Chibayiro chaJesu chakaita kuti sungano iyi ive yepamutemo uye kudeurwa kweropa raJesu ndiko kwakaita kuti itange kushanda. (Ruka 22:20) Jesu ndiye Murevereri wesungano itsva uye vakazodzwa vakavimbika vari musungano iyi vanowana nhaka yavo kudenga.—VaH. 8:6; 9:15.
15. Ndivanaani vakasarudzwa kuti vave musungano yoUmambo, uye vachawana mubayiro wei kana vakaramba vakatendeka?
15 Vanhu vanokodzera kudya nokunwa paChirangaridzo vanozivawo kuti vari musungano yoUmambo. (Verenga Ruka 12:32.) Vaya vakava vateveri vaJesu vakazodzwa uye vakaramba vakavimbika kwaari, vachitambura pamwe naye, vaizotonga naye kudenga. (VaF. 3:10) Sezvo vari musungano yoUmambo, vakazodzwa vakatendeka vachatonga naKristu semadzimambo nokusingaperi vari kudenga. (Zvak. 22:5) Vanhu ivavo ndivo vakakodzera kudya chingwa nokunwa waini paKudya kwaShe Kwemanheru.
16. Tsanangura zvinorehwa nemashoko ari pana VaRoma 8:15-17.
16 Vaya vanopupurirwa nomudzimu waMwari kuti vana vaMwari, ndivo chete vanofanira kudya chingwa nokunwa waini paChirangaridzo. (Verenga VaRoma 8:15-17.) Ona kuti Pauro akashandisa shoko rechiAramaiki rokuti “Abha,” rinoreva kuti “Baba!” Mwana anogona kushevedza baba vake achishandisa shoko iri nokuti shoko racho muchiAramaiki rinoratidza kuti anoda baba vake uye anovaremekedza. Vaya vakagamuchira “mudzimu wokugamuchirwa sevanakomana,” vanonzi vana vaMwari vakaberekwa nomudzimu. Mudzimu waMwari unopupurirana nomudzimu wavo zvichiita kuti vazive kuti vanakomana vaJehovha vakazodzwa. Saka haisi nyaya yokungoti havasisina chido chokurarama pasi pano. Vanonyatsoziva kuti vachatonga pamwe naJesu muUmambo hwokudenga kana vakaramba vakatendeka kusvika vafa. Iye zvino panyika pangosara vashoma pavateveri vaKristu 144 000 vane “kuzodzwa kunobva kuna iye mutsvene,” Jehovha. (1 Joh. 2:20; Zvak. 14:1) Mudzimu waMwari ndiwo unoita kuti vashevedzere kuti “Abha, Baba!” Chokwadi vaKristu vakazodzwa ava vane ushamwari hwepedyo naMwari!
KOSHESA TARIRO YAKO YOMUMAGWARO
17. Vakazodzwa vane tariro yei, uye vanoiona sei?
17 Kana uri muKristu akazodzwa, zvakakosha kuti ugare uchinyengetera nezvetariro yako yokuenda kudenga. Bhaibheri parinotaura ‘nezvevimbiso yokuroorwa’ kwemwenga neMuroori Jesu Kristu, kuchaitika kudenga, unonyatsonzwa kuti ndiwe uri kutaurwa, uye unotarisira kuva mumwe wevachachata naKristu. (2 VaK. 11:2; Joh. 3:27-29; Zvak. 21:2, 9-14) Mwari paanotaura muShoko rake kuti anoda vana vake vakaberekwa nomudzimu, unobva wati, “Ari kureva ini.” Uye Jehovha paanoudza vanakomana vake vakazodzwa zvokuita achishandisa Shoko rake, mudzimu mutsvene unoita kuti uve nechido chokuteerera wotaura nechemumwoyo kuti, “Izvi zvinoshanda kwandiri.” Saka mudzimu waMwari newako zvinopupurirana kuti une tariro yokuenda kudenga.
18. “Mamwe makwai” ane tariro yei, uye unonzwa sei nezvetariro iyi?
18 Kana uri ‘weboka guru’ ‘remamwe makwai,’ Mwari akakupa tariro yokurarama pasi pano. (Zvak. 7:9; Joh. 10:16) Unoda kurarama nokusingaperi muParadhiso uye unofara paunofungisisa zvinotaurwa neBhaibheri nezveramangwana redu panyika. Unotarisira kuzorarama munyika ine rugare uine hama neshamwari dzako. Unoda chaizvo kuzorarama munyika inenge isisina urombo, kushomeka kwezvokudya, kutambura, kurwara, uye rufu. (Pis. 37:10, 11, 29; 67:6; 72:7, 16; Isa. 33:24) Shuviro yako ndeyekuzotambira vanhu vanenge vamutswa kuvakafa vaine tarisiro yokurarama nokusingaperi panyika. (Joh. 5:28, 29) Unoonga Jehovha chaizvo nokuti akakupa tariro yokurarama panyika! Pasinei hapo nokuti haudyi chingwa nokunwa waini paChirangaridzo, unenge uripo nokuti unoonga chibayiro chorudzikinuro chaJesu Kristu.
UCHANGE URIPO HERE?
19, 20. (a) Ungaita sei kuti tariro yawakapiwa naMwari izadziswe? (b) Chii chichaita kuti uve paKudya kwaShe Kwemanheru?
19 Pasinei nokuti tariro yako ndeyepanyika here kana kuti kudenga, inogona kungozadziswa chete kana ukatenda muna Jehovha Mwari, naJesu Kristu uye murudzikinuro. Kana ukapinda Chirangaridzo, uchawana mukana wokufungisisa nezvetariro yako uye kukosha kwerufu rwaJesu. Saka ita zvose zvaunogona kuti uve pakati pemamiriyoni evanhu vachapinda Chirangaridzo chichaitwa zuva ranyura musi weChishanu, April 3, 2015. Musangano uyu uchaitirwa paDzimba dzoUmambo nedzimwewo nzvimbo pasi pose.
20 Kupinda Chirangaridzo kunogona kuita kuti uwedzere kuonga chibayiro chorudzikinuro chaJesu. Kana ukanyatsoteerera hurukuro ichapiwa ipapo, kuda kwaunoita vavakidzani vako kuchawedzera uye uchava nechido chokuvaudza zvawakadzidza nezverudo rwaJehovha uye kuti akasika vanhu aine chinangwa chei. (Mat. 22:34-40) Ita zvose zvaunogona kuti uve paKudya kwaShe Kwemanheru.
^ ndima 1 VaHebheru vaiti zuva raitanga painyura zuva uye raipera parainyurazve mangwana acho.
^ ndima 9 Ona Kabhuku Kanobatsira Pakudzidza Shoko raMwari, chikamu 16.
Vhiki Rekupedzisira Reupenyu hwaJesu Panyika (Chikamu 1)
Ona mepu yeJerusarema nenharaunda yakapoteredza, uyewo chati inoratidza zvakaitika kubva musi waNisani 8 kusvika Nisani 11, 33 C.E.
Vhiki Rekupedzisira Reupenyu hwaJesu Panyika (Chikamu 2)
Ona chati inoratidza zvakaitika kubva musi waNisani 12 kusvika Nisani 16, 33 C.E.
Vakazvipa Nemwoyo Unoda​—kuNew York
Ongai Jehovha Mukomborerwe
Itai Kuti Jehovha Asimbise Imba Yenyu Uye Aichengete
Murume Nomukadzi Vanokwanisa Kuva Nerudo Rwusingaperi Here?
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA January 2015
NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA January 2015